ukuphepha Computer, ukuvikelwa kanye nokususwa amagciwane malware e ngemuva ebekelwa isofthiwe ekhethekile - software unqulo wesi arab. Isilinganiso the best khulula antivirus ukuhlolwa amateur ngempela onegunya eshicilelwe uyasigcina isikhathi, kodwa ukhethe ikhwalithi yomkhiqizo obusebenzayo akulula.
Ngaphezu kwalokho, kuthiwa lokhu izinhlelo khulula unganikezi isivikelo ezifana isofthiwe ikhokhwe. Empeleni, ingxenye kwezicelo khulula ungathola isixazululo elilungile. Isilinganiso antivirus Mahhala lapha ngenzansi.
antivirus Standard kusuka ku-Microsoft: yokudlanga ukusebenza
Windows Corporation ungumholi ongenambangi phakathi abahlinzeki Amasistimu wokusebenza isofthiwe ahlobene. 2016 unyaka Windows 7 sifakwe 55% kuwo wonke amadivayisi, kuyilapho ukwabelana Linux kanye OS X 10,11 Apple siqu, ngokulandelana, 2% kanye 7% wabasebenzisi.
Esikhathini simo unqulo wesi arab khulula akuvamile tibe netisombululo ejwayelekile, kodwa izinhlelo eyamukelekayo ukuqinisekisa izinga ezidingekayo sokuphepha. Windows wasemuva, eza izinhlelo Windows 8 no-10, kuthola futhi aqede kuze kufinyelele 95% of the izinsongo ezivamile futhi mayelana 85% of the okuthiwa ukuhlaselwa sezinsuku ezingu-zero, okusho amagciwane zakamuva, ngokumelene ezingakasekelwa ithuthukiswe ukuvikelwa algorithm.
Lizothola ngokwanele "the wasemuva" Windows ngoba izidingo umsebenzisi isilinganiso
Ngokuvamile, kuhambisana eziyisisekelo imithetho yokuphepha, ukusetshenziswa isiphequluli sesimanje kanye izibuyekezo zesofthiwe njalo ongaphumelela usebenzise unqulo wesi arab okujwayelekile (impendulo sohlelo "Umdlali wasemuva" Windows ukweseka lesi sici) njengoba isixazululo esikhulu ukuze isimo yezokuphepha. Kodwa labo ukulandwa kokuqukethwe pirated, kuyinto umsebenzisi Inthanethi asebenzayo, noma egcinwe hard disk idatha ebalulekile, kungcono ukubheka ezinye, mahhala, kodwa izinhlelo ezimbalwa obusebenzayo kakhudlwana.
Independent antivirus ukuhlolwa labs
ukuhlolwa Comparative ngenombolo enkulu amasampula sasesiqhutshelwa ngokuholela antivirus labs. Imiphumela yokuhlolwa kwabo ukuvumela onjiniyela ukuthuthukisa imikhiqizo yabo, ngakho iqhaza ngokuvamile ikhokhwe. Ngokuyinhloko isofthiwe unqulo wesi arab Windows isilinganiso (uhlelo lokusebenza yisona esikhulunywa abantu abaningi, ngakho-ke futhi ihlolwa) zihlanganisa izinguqulo ikhokhwe kwe-software, kodwa uma isixazululo khulula uyabavikela ephelele - isofthiwe futhi ahlolwe.
Ngo-May 2016 inkampani AV-kucatsaniswa kwenziwe ukuhlolwa 19 anti-virus izinhlelo ashukumisayo. Ukuphenya ukusetshenziswa yesikhulumi Windows 7 (ngesofthiwe third-party olukhona njengamanje, isibonelo, i-Adobe Flash noma i-Java) kanye amasampula test 350 malware. Ngezansi simo khulula antivirus AV-kucatsaniswa version.
Imiphumela yocwaningo enokwehla
Isilinganiselwa "Anti-free '(i-Windows 10 kanye nezinye izinhlelo zokusebenzisa ngesisekelo Nhlangano) salibangisa Bitdefender ThreatTrack Vipre, abangazange uphuthelwe usongo olulodwa futhi wasebenza kungekho positives bamanga. Tebuholi kuthiwa matasa njengoba Trend Micro futhi F-Secure nge 100% umphumela ukuqashelwa izinhlelo ezinonya, kodwa ngokulandelana 7 futhi 15 positives bamanga. Ngavala abaholi ezinhlanu Kaspersky Internet Security, abashwebe 0.3% of the izinsongo, kodwa kulolo vivinyo kungekho positives bamanga.
Mahhala analogue ihlolwe unqulo wesi arab
Mahhala Analogue Bitdefender - Edition Mahhala - isetshenziswa esikhundleni izicelo eziningi commercial, inikeza isivikelo ngemuva igciwane futhi uyakwazi ukubona, uhlelo shpiony.ThreatTrack Vipre ayitholakali kule nguqulo free. Trend Micro Titanium Antivirus + likhululekile kuphela ngesimo Isivivinyo (ukusetshenziswa izinyanga ezingu-6), kanye F-Secure (izinsuku ezingu-90). Analogue of Kaspersky Internet Security kuyinto Kaspersky Mahhala Anti Virus (Mahhala) nge ilayisensi khulula, okuyinto ukhubazeke eziningana, uma kuqhathaniswa nabangu-Kis noma Ubude Wokuvikela, kodwa uhlala e-isixazululo elilungile.
Isilinganiselwa antivirus-Windows: ukusebenza
"Anti Virus Free" (yokulinganisela senziwa imithombo eminingi elihle futhi abalandeli) ngokuvamile ezahlukene ngokuya ukusebenza izinguqulo ikhokhwe. Nokho, lokhu akusho ukuthi isofthiwe freeware akakwazi ukuvikela ikhompyutha yakho kusuka amagciwane, malware ne-spyware.
Ngokuvamile, anti-virus software inikeza izici ezilandelayo:
ziskenele izinsongo ngesicelo yomsebenzisi;
ukuvikelwa njalo kohlelo ngemuva;
uhlelo Ifayela scan qalisa sikhathi;
ukuthola i-algorithm we-malware zakamuva, izindlela emzabalazweni ezingakasekelwa kufakwe inguqulo jikelele isicelo;
Sebenza isitoreji samafu;
ukulawula kwenethiwekhi (firewall noma firewall);
zangaphandle Intrusion Ukuthola System;
Ukuvikelwa imeyili, ukuthola nezinamathiselo ezinonya;
ukuhlaziywa exhumana ukuthola i-imeyli engadingeki;
Kulokhu, the best khulula antivirus-Windows 7 (isilinganiso ukusebenza) asikho isidingo ukufaka lonke uhla lokukhethwa kukho. Into esemqoka ukuthi ikhambi abakhethiwe iyahlangabezana nezidingo kanye ukubukwa subjective of umsebenzisi othile.
Akalwe: ESET Nod32 Smart Security
Zonke izici ezingenhla kuhlanganisa ndzawonye kulwa samagciwane nge egqinsiwe ESET Nod32 Smart Security. Ngaphezu ejwayelekile anti-bokweba imininingwane ebucayi, ukuphepha, isistimu yefayela, Ukufinyelela i-Inthanethi, i-imeyli umile amaklayenti imeyili ESET has ezinye izici ezithakazelisayo. Phakathi lezi zici ezengeziwe:
"Antitheft" ebheka indawo idivayisi uhlelo olufakwe kwenza skrini ikuvumela ukuthi ubukele nge webcam "ukuphatha kabi abanye" phezu laptop eyebiwe;
isicelo lokuvikela ukuxhumana nomphakathi, asekelwe kuze kube manje, Nokho, Twitter kuphela, kodwa unakho ukuba abe inzuzo sina ukuncintisana phezu nenye isofthiwe ESET unqulo wesi arab;
Eset SysInspector ihlaziya isimo yesistimu yokusebenza, inquma izilungiselelo yingozi futhi ikuvumela ukuhlonza izimbangela zezinkinga kukhompyutha yakho.
A ethile enkulu ukungabi isofthiwe anti-virus version khulula Ukuvikelwa, ukuqopha umsebenzi womsebenzisi (igundane ukunyakaza, okhiye, yokunamathisela, izithombe futhi ngezinye izikhathi wesibuko sevidyo).
Mahhala antivirus Isilinganiselwa: Ukusebenza kanye namazinga okuhlola
Enye antivirus isilinganiso khulula ihlanganiswe imiphumela yokuhlola kanye nokuhlaziywa uhlelo ukusebenza. Awakuthinti ngesivinini ebhuthini Panda Antivirus Pro ne 360 Ubude Security, akuzona kude ngemuva AVG Antivirus Mahhala, Bitdefender Antivirus Mahhala Edition kanye ESET NOD32 Smart Security. Kuyaphawuleka ebambezela ukulanda AVIRA Mahhala Antivirus (imizuzu emithathu).
Iskena uhlelo amafolda (for the ukuthola efanayo malware) asithathayo Avast Mahhala Antivirus, AVG Antivirus Mahhala, AVIRA Mahhala Antivirus futhi ESET NOD32 Smart Security imizuzu engaba yishumi. Umphumela okubi kakhulu yabonisa Comodo Antivirus - ukuskena wathatha isikhathi esingaphezu kwehora.
Inani ezincane kunazo zonke imemori esetshenziswe Avast Mahhala Antivirus futhi Panda Antivirus Pro (zonke 40 mbar), kanye ngempela "sosondonzima" kukhona AVIRA Mahhala Antivirus (175 mb), AVG Antivirus Mahhala (130 mb) futhi 360 Ubude Security (120 mb). Kulokhu, AVIRA isebenzisa processor ngo-% 5 kuphela, kanti ezincane AVG Antivirus Mahhala - by kakhulu ngendlela 16%.
Distribution lezihlalo ngokuvumelana isilinganiso
Ngokuvamile, isofthiwe unqulo wesi arab khulula Windows XP (ukusebenza isilinganiso), kanye nezinye izingosi (lwe-Windows 7, 8, 10) zitholakala kanje:
Avast Mahhala Antivirus futhi ESET NOD32 Smart Security.
360 Ubude Security.
AVG Antivirus Mahhala futhi Bitdefender Antivirus Mahhala Edition.
AVIRA Mahhala Antivirus futhi Comodo Antivirus.
Ekuhlaziyeni Panda Antivirus Pro
Omunye izinzuzo main - umthwalo encane ohlelweni kusukela Panda Antivirus kanye ekuvikeleni eyanele - ngoba uhlelo Google Antivirus. Isofthiwe ine kakhulu imisebenzi ezidingekayo, ozikhethela etholakalayo USB ukuskena, kodwa futhi ubuthakathaka abalulekile ubhale impela eningi.
Ngokwesibonelo, unqulo wesi arab kuphela khulula (isilinganiso wavuma Panda Antivirus isixazululo esingcono kakhulu esekelwe imiphumela) ayinikeli isivikelo ukucabhela idatha izinhlelo third-party, idinga esebenzayo inthanethi for ukuskena uhlelo futhi ayinikeze Ukuvikelwa sewebhu. Ngaphezu kwalokho, abanye abasebenzisi bathole malware efayeleni ukufakwa kwe-antivirus. esibonakalayo ebukekayo kungenye ethile ye Panda Antivirus.
Uma ubuchwepheshe bama-computer emakethe Windows unesikhundla ehamba phambili, i-mobile yokusebenza uhlelo Android cishe esinakho: 80% smartphone ukusebenza kwi-Android. antivirus Ucingo inikezwe njengoba nozakwabo sekushiwo izinguqulo enwetshiwe, nezinhlelo ezisebenza kuphela Smartphones.
laboratory AV-Test uqhuba ukuhlolwa software mobile unqulo wesi arab. Isilinganiso antivirus Kumahhala "Android" wahola AhnLab isicelo. Uhlelo lokusebenza inikeza ukubuyekeza olunzulu idivayisi yeselula, kuvimbela izinsongo Inthanethi, lets Ungakhathazeki mayelana nokuvikeleka amafayela nenye idatha yomuntu siqu. Iningi izinhlelo wethule amazinga e, kungavamile ingxenye isiRashiya, ngakho nibaluleke uthembele yangempela impendulo yomsebenzisi - laboratories elihle, angathathwa esikalini isicelo isiRashiya akukho.
Pretty isixazululo esihle abasebenzayo ngokukhetha CM Security, Dr.Web Ukukhanya ukuvikela ezamahala (ukubuyekezwa, simo ngezansi) AVG Unqulo wesi arab. CM Security akusho ukulayisha uhlelo futhi ukwenza imisebenzi yayo ngempumelelo, Dr.Web Khanyisa inikeza isivikelo esinamandla, kodwa annoys abantu abaningi bayingxenye ukukhangisa. AVG Unqulo wesi arab futhi yisisombululo jikelele, ngaphezu, Pro-nguqulo yohlelo lokusebenza izici extra eziningi ezitholakalayo ewusizo, kodwa inhlangano enjalo ibusa semali imithombo, yingakho idivayisi angase agijime kancane.
isofthiwe Antivirus kubalulekile, njengoba ngaso sonke isikhathi ukuhlangabezana nezidingo umsebenzisi angakwazi preset Ukuvikelwa isikhathi ukulwa namagciwane ne-malware (ikakhulukazi kumadivayisi eselula). Ukukhethwa yesixazululo elilungile lapha incike izidingo zabantu ngabanye futhi izahlulelo subjective, ngakho ezihlukahlukene izilinganiso engaqondiswa, kodwa uthembele ukuhlolwa akufanele ngokuphelele. Kuyini ukusetshenziswa anti-virus, ogxile imiphumela yocwaningo ubhekana imisebenzi svomi, kodwa elementrano esingesihle ukusebenzisa noma kakhulu ukubambezela computer noma ngomakhalekhukhwini? Abasebenzisi abaningi bafuna kuqala uzame ezimbalwa ongakhetha ukuba ekugcineni baya elula olulodwa.
Honey - inzuzo kubo bonke